Nepali Rajneeti | बालुवाटार बैठकपछि ओली शीतल निवासमा, बेलुका मन्‍त्रिपरिषद् : के होला संभावित कदम ?
बालुवाटार बैठकपछि ओली शीतल निवासमा, बेलुका मन्‍त्रिपरिषद् : के होला संभावित कदम ?
बैसाख २३, २०७८ बिहिबार १७४ पटक हेरिएको
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो समूहको स्थायी कमिटी बैठक सकेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका छन्। स्थायी कमिटी बैठक बिहान १० बजे बोलाएका थिए। बैठक हतार हतारमा सकाएर उनी राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका हुन्। राष्ट्रपतिसँग पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र संभावित कदमबारे परामर्श गर्ने बुझिएको छ।
संसद्‍बाट विश्‍वासको मत नपाउने लगभग निश्‍चित भएकोले ओलीले फेरि अर्को कदम चाल्‍ने अनुमान राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ। वैशाख २७ बाट उम्किने उपाय र संभावित कदमबारे उनले राष्ट्रपति सल्लाह लिन शितलनिवास पुगेको बताइएको छ।बिहीबार बेलुका ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन्।
बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको पूर्वउपाध्यक्ष डा. देवकोटा राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा बागमती प्रदेशबाट गठबन्धनको साझा उम्मेदवार बन्न लागेका हुन्। उता एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई नै उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेका छन्। माओवादीबाट निर्वाचित बादलले दल त्याग गरेपछि रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा उपचुनाव हुन लागेको हो। बागमती प्रदेशको एक सिटका लागि जेठ ६ गते उपचुनाव हुँदैछ।